दसैंको रमाइलो छाडेर ड्यूटीमा आउनु पर्दा नरमाइलो लाग्छ : नर्स सोभा सुवेदी
कात्तिक १, २०७५ बिहिवार १५:०५:२१
नर्स भएर काम गर्न सुरु गरेको १० वर्ष भयो। तर १० वर्षको अवधिमा ९ वर्षको दसैं अस्पतालमा ड्यूटी गरेर बितेको छ। एउटा दसैंमा मात्रा आनन्दसँग घरमा बस्ने मौका मिलेको छ। हरेक दसैंमा घरमा बुबाममीको हातको टिका लगायो अनि छिटो–छिटो ड्यूटी गर्न अस्पताल पुग्नुपर्छ। ...
दसैंका दुई घटना : पिङबाट लडेर साथी गुम्यो, कापीको पाना च्यातेर तास खेल्यौँ
कात्तिक १, २०७५ बिहिवार १४:४५:४४
रोग र दुर्घटनाले भनेको बाजा बजाएर आउँदैन। कहिले कतिबेला कसलाई यस्तो समस्या पर्छ थाहानै हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरु हरदम तयार अवस्थामा बस्नु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीले आज चाडबाड हो बिदा बस्छु भनेर घरमा बस्न मिल्दैन। बिदामा नै बसेको छ भने पनि अस्पतालबाट फोन...
टीकाको दिन सिनियर दिदीले गल्ती नहुँदा पनि बिरामीको अगाडि गाली गर्नुभयो : नर्स पुष्पा केसी
कात्तिक १, २०७५ बिहिवार १४:०५:१७
नर्सिङ यस्तो पेसा हो जुन पेसामा दसैं, तिहार, परिवार अन्य चाडबाड भनेर घरमा बस्न पाइदैँन। नर्सको पहिलो प्राथमिकता नै बिरामीको सेवा हो। नर्स भएर काम गर्न सुरु गरेको ३३ वर्ष भइसकेको छ। ३३ वर्षको अनुभवमा कुनै पनि यस्तो दसैंमा परिवारसँग बसेर रमाइलो गरेर मनाउन पाएको छैन...
दसैंको विदामा साहित्यिक पुस्तक पढ्छु : डा दीवाकर शर्मा
असोज ३१, २०७५ बुधवार १८:१२:०२
परिवारकै साथमा दसैं मनाउने गरेको छु। यो बेलामा सामान्यतया अलि फुर्सद हुन्छ। मेडिकल पढ्न दश वर्ष बाहिर बिताए पनि नेपाल फर्किएपछि ड्युटीकै कारण टीका छुटाउनुपरेको छैन। यो समय घरपरिवार र छोराछोरीसँगै समय बिताउँछु। अरु समयमा बाहिरबाहिर भएकाले त्यति समय दिन भ्याएक...
त्यो दसैं – गाउँभरी डुलेर टीका लगाउँदा जम्मा दुई रुपैयाँ दक्षिणा पाइयो : डा विप्लव सापकोटा
असोज ३१, २०७५ बुधवार १४:०८:५८
मेरो पुख्र्यौली घर पर्वत हो। सानो छँदा हामी दसैं मनाउन उतै जान्थ्यौँ। सानोमा दसैं मनाउने क्रममा भएको एउटा घटना म अझै पनि भुल्न सक्दिन। सायद म ७ वर्षको थिएँ होला। हामी दसैं मनाउन गाउँ पुगेका थियौँ। हामी गाउँ पुगेको दिन एक जना महिला सुत्केरी हुनु भयो। दसैंको सम...
खानपान र घुमघामका लागि मात्र होइन दसैंमा स्वास्थ्यका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ : डा.सन्देश जिसी
असोज ३०, २०७५ मगलवार १८:४९:४१
हरेक नेपालीहरुलाई मेरो दसैंको शुभकामनासँगै के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा वर्षको एकचोटी रोग लागे पनि नलागे पनि होल बडी चेक अप गराउनुहोला। खानपान, घुमघाम, सपिङका लागि मात्र होइन दसैंमा स्वास्थ्यका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्दछ। आफू स्वस्थ रहेको थाहा पाएपछि ...
दसैंको टीकाको दिन नै नाइट ड्युटी पर्‍यो : नर्स सोफिया प्रधान
असोज ३०, २०७५ मगलवार १८:१९:५४
काठमाडौं- नर्स सोफिया प्रधान वीर अस्पतालको हेमोडायलाइसिस युनिटमा कार्यरत छिन्। मिर्गौला फेल भएर डायलाइसिसका लागि आएका बिरामीको सेवामा उनी खटिरहेकी हुन्छिन्। गत वर्ष दसैंको टीकाको दिन नै उनको नाइट ड्युटी परेको रहेछ। नर्स सोफिया प्रधानले स्वास्थ्यखबरकी सिर्जना खत्रीसँग आ...
१४ तस्बिरमा हेरौं डा ज्योति ज्ञवालीको दसैं मुस्कान
असोज ३०, २०७५ मगलवार १७:४१:४२
काठमाडौं- डा ज्योति ज्ञवाली दसैं मनाउन पुरानो घर पाल्पा जाँदै छिन्। पिपल्स डेण्टल केलेजबाट बिडिएस गरेकी डा ज्ञवाली दसैं सुरक्षित र स्वस्थ रुपमा मनाउन सुझाब दिन्छिन्। दसैंको समयमा सबैलाई खुसी रहन सन्देसन दिन उनले दसैंको टिका, जमारा लगाएर मुस्कान सहितको तस्बि...
जब दसैंको टिकाकै दिन मैले जाँचेको बिरामीको मृत्यु भयो...
असोज २९, २०७५ सोमवार १९:५३:००
विगत ६ महिनादेखि स्टार अस्पतालमा कार्यरत डा.उत्तम लौडारीले त्यसभन्दा अगाडी काठमाडौं मेडिकल कलेजमा काम गरिसकेका छन्। जेनेरल सर्जन उनी दसैंको समयमा आफू ड्युटीमा खटिरहँदाको अनुभव स्वास्थ्यखबरकी बुनु थारुलाई यसरी सुनाए : पहिला म बाल्यकालमा चंगा उडाउनको एकदम श...
असोज २८, २०७५ आइतवार २०:३०:१२
कुरा सायद १५ –२० वर्ष अगाडीको हो। म परिवारसँग टीका लाउँदै थिएँ। टिका थाप्ने क्रममा मलाई एउटा सिकिस्त बिरामी छ भने फोन आयो। बच्चा एकदम क्रिटिकल छ भनेर फोन आयो। म टीका नथापिकन दोडैर त्यो अस्पताल पुगेँ। रक्त क्यान्सर भएका एक जना बालक सिकिस्त भएका रहेछन्। ...
धेरै पटकको दसैं विदेशी अस्पतालमा बिताएँ : डा बाबुराम पोखरेल
असोज २८, २०७५ आइतवार १५:३४:४५
दसैंको समयमा गाउँभरी रंगीचंगी फूल फूल्ने भएकाले मलाई निकै रमाइलो लाग्छ। मेरो घर गोदावरी भएकाले गाउँभरी नै रंगीचंगी देखिन्थ्यो। फूल फूलेको देख्दा मनमा एक किसिमको उर्जा दिन्थ्यो । हामी गाउँभरी डुलेर यसको आनन्द लिने गथ्र्यौं । अहिले पनि हाम्रो घर वरिपरि ढकमक्क फुलहरु ...
नर्स र पुलिसको जागिर उस्तै–उस्तै
असोज २७, २०७५ शनिवार १९:३०:४७
स्टार अस्पतालमा चार वर्षदेखि कार्यरत छु। मेरो स्थायी घर मोरङ हो। ७२ सालदेखि स्टार अस्पतालमा कार्यरत छुँ। १५ वर्ष भयो मैले निर्सिङ क्षेत्रमा काम गरेको। नर्सिङ पेसा भनेको त आफू दुःख लिएर सहेर भए पनि हाँसेर सेवा दिने पेसा हो। हाम्रो मज्जाले समय बिताउने भेनर छुट्...
चाडबाडमा मेरो व्यस्तता देखेर छोरी नर्स बन्दिन भन्छिन्
असोज २७, २०७५ शनिवार १७:५१:०४
दशैंमा बिदा लिएर घरमा परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्न मन लाग्छ। सबैलाई त्यस्तै हुन्छ। अस्पतालका सबै नर्सले बिदा लिए भने त अस्पताल बन्द गर्नपर्ने हुन्छ। बिरामीलाई छाडेर आफु रमाइलो गर्न पनि भएन। त्यसले आफैं बुझेर बिदा मिलाउनुपर्छ। दशैंको बेलामा हामी नर्सहरुलाई बि...
दसैंमा चङ्गा उडाउँदा घाइते भएका २५ जनाको उपचार गर्नुपरेको त्यो दिन : डा श्रीकृष्ण गिरी
असोज २६, २०७५ शुक्रवार १८:१०:५२
एसएलसी उर्तीण गरी काठमाडौँ पढ्न आएदेखि एकै ठाउँमा सबै बसेर दसैंमा मनाउन पाइएको छैन। बुवाआमा, श्रीमती, भाईहरु, बच्चाहरु सबै सँगै मनाउन कहिल्यै मौका मिलेको छैन। म एसएलसी सकेर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा एचए पढ्न आएको थिएँ। त्यसपछि एमबिबिएस गरेको हुँ...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दसैंको टीका थाप्यौं : डा अन्जल विष्ट
असोज २५, २०७५ बिहिवार १९:५२:२७
काठमाडौंमा बसोबास भएपनि मेरो पुख्र्यौली घर झापा हो। दसैं मनाउन सकेसम्मघरै जाने गरेको छु। तर कहिले साइत जुर्छ त कहिले जुर्दैन। चाहँदाचाहँदै पनि कतिपटक ड्युटी परेर घर जान नपाएका घटनाहरु मानसपटलमा घुम्ने गर्छ। कहिले बसको टिकट नपाएर पछाडिको सिटमा खाँदिएर गएका स...
आइजिपीको फिटनेस रहस्य
असोज २५, २०७५ बिहिवार १६:२७:३४
काठमाडौं– काममा ‘कूल’। खानपिनमा बिशेष ख्याल। नेपाल प्रहरीका २६औं महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाल यी दुई कुरामा सचेत छन्। उमेरले ५२ वर्ष पुगे पनि ‘लुक्स’ भने युवाको झैं छ। उनी खानामा चिल्लो पटक्कै मन पराउँदैनन्। मासुमा चिके...
पहिलो पटक मैले दसैंमा मासु पकाएर खुवाएँ, सबैले अनौठो र मिठो मान्नुभयो : डा.शशि शर्मा
असोज २५, २०७५ बिहिवार ११:१३:०८
पहिलाको जस्तै छुट्टी नै नमिल्ने त हुँदैन अचेल। म युवा डाक्टर हुँदा चाहिँ छुट्टी पाउन गाह्रो हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन। दसैं राम्ररी मनाउन पाएको छु। एक/डेढ वर्ष अगाडिको कुरा हो। मलाई दसैंमा एउटा घटनाको सम्झना आइरहन्छ।एकजना बिरामीको दसैंको समयमा बढी रक्सी ...
विश्वच्याम्पियन नेपाली धावकको फिटनेस राज [भिडियो]
असोज २१, २०७५ आइतवार १९:१६:५९
संखुवासभाको विकट बस्ती मादी मुलखर्कमा जन्मिएका निमेष गुरुङ (२९) सन् २००८ डिसेम्बरमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती भएका थिए। पुलिसमा भर्ती भएपछि उनी मोटाउँदै गए। उचाई ५ फिट ३ इन्च भए पनि सन् २०१२ सम्ममा उनको तौल ६९ केजी पुगिसकेको थियो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै खेलक...
नेपालकी अभिनेत्री अस्ट्रेलियामा डेन्टल नर्स
असोज १४, २०७५ आइतवार १४:०१:२२
नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा कुनै समयको चर्चित नाम हो प्रकृति श्रेष्ठ। ‘को होला त्यो’, ‘हेलो हनीबनी’ जस्ता म्युजिक भिडियोमार्फत दर्शकमाझ चर्चा कमाएकी अभिनेत्री प्रकृति पछिल्लो ४ वर्सदेखि अस्ट्रेलिया बस्दै आएकी छन्। फिल्म ‘होस्टेल’ बाट...
३. खसीको बकपत्र !
४. कुन मासुमा कति पौष्टिक तत्व पाइन्छ? रातो मासु राम्रो कि सेतो?
६. दसैंका दुई घटना : पिङबाट लडेर साथी गुम्यो, कापीको पाना च्यातेर तास खेल्यौँ
७. टीकाको दिन सिनियर दिदीले गल्ती नहुँदा पनि बिरामीको अगाडि गाली गर्नुभयो : नर्स पुष्पा केसी
८. क्यान्सर सम्बन्धी नर्सिङ पढाइ हुने
९. प्रधानमन्त्री ओलीले गरे दाँतको परीक्षण
१०. उमेरअनुसार कति मासु खाने?